7 Seeds Ma mudan tahay in la daawado? - Muuqaalka Gawaarida
Leave a Comment on 7 Miyuu Mudan Yahay In La Daawado?
7 Seeds waa anime cadaalad ah oo cusub oo soo baxay oo laga sii daayay Netflix Juun 2019. Waxaa asal ahaan laga soo qaatay manga uu qoray Yumi Tamura. Waxaan jeclaan lahaa inaan hubiyo inaad ogtahay inay tani tahay dib u eegis 7 Abuur. Anime wuxuu raacayaa sheekada koox ka badbaaday oo qayb ka ah dhul iyo mashruuc bani'aadamnimo si loo caawiyo hubinta jiritaanka aadanaha.
Waddan kasta wuxuu doortaa inyar oo dhan oo ka mid ah koox wadareed kuwaas oo noqon doona kuwa ka badbaada, waxaa loogu yeeraa 7 abuurka waana tan tan loogu magac daray mashruuca 7 Abuurka. Su’aashu waxay tahay 7 Seeds ma mudan yihiin in la daawado? Waxaan isku dayi doonaa oo aan dhex mari doonaa sababaheyga anigoon waxbadan iska bixin haddiiba ay dhacdo inaad daawato 7 abuur.
Guudmarka - 7 Abuur miyey mudan tahay in la daawado?
7 Abuurku wuxuu lahaa dhibaatooyin badan oo aan soo xusay, qaybtii 4aadna runtii waxay bilaabeen inay isdulsaaraan. Haddii aan lagu dhibi karin inaad ka akhrisato qaybtaan iyo jilayaasha waxaan kuu soo jeedin lahaa inaad u dhaadhacdo liiska oo aan ka wada hadalno sababaha 7 Seeds ay u mudan yihiin daawashada iyo sababaha 7 Seeds aysan u qalmin daawashada, way badbaadin doontaa waqti uun Dulmarka guud ayaa ku dari doona dib-u-eegidgan 7 Seeds.
7 Seeds, Qaybta 4aad - Ma 7 miidood baa mudan in la daawado?
Waddan kasta wuxuu leeyahay kooxdan xul ah ee dadka la xushay. Ka dib waxaa la geliyaa hurdo la qaboojiyey waxaana loo daayaa waqti go'an oo ay wada seexdaan ka dibna dhammaantood way soo toosaan. Sababta ay u qaboojiyeen hurdada ayaa ah asteriyoodhku wuxuu ku siganayaa inuu dhulka ku dhufto waxayna noqonayaan kuwa kaliya ee badbaada. Hadaf hore loo qoondeeyay ayaa ah in dib loo buuxiyo dhulka.
Sheeko muhiim ah - Miyuu 7 Seeds u qalmaa daawashada?
Sheekada ugu weyn ee 7 Seeds haddii aad u xiiso badan tahay laakiin waxay kuxirantahay hal mawduuc ama qodob gaar ah. Tan waxaan uga jeedaa waa sida sheekooyinka loo soo bandhigay ay aad ugu egyihiin aragtida tunnelka. Aynu ka bilowno dhibaatada guud, oo u muuqata inay tahay inay ku noolaadaan duurka hadda jasiiraddan cusub ee ahayd Japan. Dhulkii ay markii hore ku ogaayeen Jabaan waa la beddelay oo waxaa la muujiyey in ka badan 3 sano ay dhaaftay tan iyo cirifka dhulka. Qaab dhismeedka sheekadu wuxuu naga caawin doonaa inaan dib u eegis ku sameyno 7 Abuurka.
Sheekadu kaligeed ayaa qayb weyn kaqaata qoyanta iyo inkale 7 Seeds ayaa mudan in la daawado iyo inkale. Tani waxay u soo bandhigeysaa dhibaato weyn qaar ka mid ah badbaadayaasha maaddaama badankood ay reero leeyihiin markii ay soo tooseen sidaa darteed dhammaantood sida muuqata hadda way dhinteen. Tani waxay ka dhigeysaa qaar badan oo ka mid ah jilayaashu inay u dhaqmaan si caqli-gal ah oo aan la jeclaan karin maadaama ay had iyo jeer qarka u saaran yihiin, iyagoo u maleynaya inay ku xigi doonaan oo ay is-uruurinayaan si midba midka kale u noolaado.
Sheekadu waxay markaa si dhow ula socotaa ficilada koox kasta markay u socdaan oo ay ku sii socdaan dhulka cusub. Intii lagu gudajiray waqtigaas markay waxan sameynayaan waxay la kulmaan dad kale oo iyaguna qayb ka ah mashruuca 7 Abuurka. Dadkani waxay kaloo u sheegaan mashruuca iyo muddada ay joogeen. Waxay u muuqataa in 7dii Seeds ee badbaaday dhammaantood ay soo tooseen waqtiyo kala duwan. Marka ma 7 Seeds ayaa mudan in la daawado? Aragtida badbaadada waxaad u malaynaysaa in sida ugu wanaagsan ee lagu xaqiijin karo badbaadada aadanaha ay noqon karto in dhammaantood ay wada toosaan isla waqtigaas sax? Hagaag ma ahan 7 Seeds, waxay ku saabsan tahay mushkilad qorsheyn ah oo aan la kulmay markii aan daawanayay oo aan gadaal ka gali doonno dhibaatooyinka laakiin marka hore waa astaamaha.
Jilayaasha ugu muhiimsan - Miyuu 7 Seeds u qalmaa daawashada?
Jilayaasha ku jira 7 Seeds waxay ahaayeen kuwo si gaar ah loo ilaawi karo oo lagu caajiso aragtidayda oo midkoodna kama sarrayn xiisaha aan u qabo si uun. Dhammaantood waxay u muuqdaan kuwo loo farsameeyay inay ku habboonaadaan hal koox oo gaar ah ama waxaa loogu talagalay hal ujeedo keliya oo maskaxda lagu hayo. Waxaad laheyd gabadha aamusnaanta badan ee Natsu Iwashimizu, ninka guud ahaan la buun buuniyay ee xanaaqa badan ee ku dhaca dadka kale neerfaha oo u dhaqmo sida ugu macquulsan marka loo eego xaalada, Semimaru Asai, dabeecada nooca labka ama ragga sida aan ku tilmaami karo. Inta badan jilayaasha 7 Seeds oo runtii ahaa kaalin muhiim ah oo xusid mudan aniga ayaa ilaaway labadii qaybood ee ugu horeeyey runtiina waxaan ku dhibtooday inaan xasuusto magacyadooda ama dhibaatooyinkooda iyo astaamahooda.
Marka hore waxaan haynaa Natsu Iwashimizu oo ah nooca dabeecadda ugu weyn, sikastaba ha noqotee aragtida ayaa isku badalaysa koox koox, marka asal ahaan midna ma jiro. Waxay ku habboon tahay dabeecadda nooca madaxa ditzy-ka ah runtiina ma jiraan wax muhiim ah oo laga sheego iyada ama aan xusuusan karo.
Marka laga reebo taas iyadu waa quruxsan tahay, wax aan caadi ahayn. Iyadu way xishoonaysaa, way naxariis badan tahay oo cidna jidka ugama hor tagto, kaliya waxay doorbidaa inay caawiso kuwa kale iyo inay si fiican u caawiso kooxda B ee xagaaga.
Marka xigta waxaan haynaa Arashi Aota oo ah nin kasta oo nus-alfa lab ah, oo bilowgiiba igu dhacay neerfaha. Qoto dheerida kaliya ee xusida mudan ee la siiyay waxay ahayd xaqiiqda uu u lahaan jiray gabar saaxib ah kahor dhacdooyinka taxanaha. Waxaan kaliya ku arki karnaa iyada oo loo marayo taxadar taxane ah oo kooban taasna waxay ku saabsan tahay dhammaan wixii nala siiyay.
Waxay ahayd inay na siiso, daawadayaasha, wax aan maal gashano Aota, laakiin runti aniga saameyn kuma lahan aniga, si dhib yar ayaan u siiyay tuurista xiriirkiisa, sababta ay ugu fikireen in dib-u-eegisyadan kooban ay nagu filan yihiin inaan daryeelno Ma aqaan.
Ugu dambayntii waxaannu leenahay Semimaru Asai, oo xanaaq badan, oo ka badbadis badan antagoniste kaas oo kiciya buuq ku saabsan wax kasta oo taxane ah. Wuxuu leeyahay dabeecad guud oo aan la jeclayn, ma jiraan wax xiiso leh ama qabow oo isaga ku saabsan.
Isagu ma leh qoto dheer oo dhab ah wixii la siiyana si madmadow leh ayaa looga gudbay, taasoo ka dhigaysa dabeecaddiisa gebi ahaanba caajis iyo xiisayn la'aan. Theres muuqaal ah oo uu kaga hadlayo magaaladiisa hooyo laakiin si liidata loo qabtay si dhib yar uma daryeelin. Waxay isku dayeen inay ka dhigaan inuu hoos u dhigo codkiisa si qoto dheer uu u dhawaaqo laakiin ma shaqeynayo.
Xarfaha Sub - Miyuu 7 Seeds mudan yahay in la daawado?
Inta badan sida jilayaasha waaweyn jilayaasha hoose badidoodu waa isku mid, in kasta oo ay ka baxsadeen shabaqa maaddaama ay ahaayeen kuwo qurux badan oo la illoobi karo laakiin haddana jilayaal hoose. Midkoodna ma aheyn mid gaar ah, xiiso leh ama xitaa asal ah tanina waxay ka dhigtay taxanaha xitaa inay adagtahay in la daawado, sida haddii sheekadu aysan u xumeyn. Runtii ma aanan helin waqti aan ku soo daro dhammaantood, way badnaayeen.
Sababaha ay mudan tahay in la daawado - 7 Seeds ma mudan tahay in la daawado?
Sheeko asal ah & mid gaar ah (nooca) - 7 Seeds ma mudan tahay in la daawado?
Sheekada 7 Seeds waa fududahay in la galo sheekaduna ma ahan mid adag in la fahmo ama madaxaaga la wareego. Tani runti maahan wax dhulka kaligeed jabinaya laakiin anime-kani wuxuu soo bandhigay wax cusub oo cusub oo aanan runtii arkin sannadkan taasna qayb ahaan waan ku faraxsanahay. Waan ka warqabaa in sheekada bini-aadamka ugu dambeeya ee adduunka oo dhan aysan ahayn wax cusub. Si kastaba ha noqotee, macnaha guud ee nala siiyay, iyo liisaskan liistada cusub waxaan u maleynayaa inay nabdoon tahay in loo ogolaado inay is rogrogto. Weli waxay ku sii kordhineysaa su'aalaha ah Ma 7 Seeds ayaa mudan in la daawado?
Habka Animation - Miyuu 7 Seeds u qalmaa daawashada?
Bilowgii runtii wax dhibaato ah kuma qabin qaabka animation-ka ee 7 Seeds, waxaan sameeyay nooc la mid ah laakiin waxba kuma amaanayo. Ma jirin wax aad u muhiim ah oo aan ka faalloon karo, laakiin ma jiro wax shit ah oo u qalma in shaqsiyan faallo ka bixiyo. Waxaan u maleynayaa in ereyada saxda ah ee 2 ay si xad dhaaf ah u qanci lahaayeen. Way fiicneyd in la fiiriyo, taas waan siinayaa. Marka ma 7 Seeds ayaa mudan in la daawado?
Jilayaasha qayb ahaan la jeclaan karo - Miyuu 7 Seeds u qalmaa daawashada?
Jilayaasha 7 Seeds waxay ahaayeen kuwo la jeclaan karo in la yiraahdo ugu yaraan. Runtii ma jirin wax adag ama xiiso leh oo iyaga ku saabsan. Runtii ma ahan wax dhibaato ah oo taxane ah, runti wax badan oo laga sheego ma jiraan, runti taas ayaan uga jeedaa. Dabeecad kastaa waxay qabataa wixii ay ahayd inay qabato, asal ahaan waxaa loo xilsaaray shaqo. Nasiib darrose intaas kama sii fogaadaan. Sidoo kale tani waa mawduuc caan ka ah taxanaha oo dhan.
Sababaha 7 Seeds uma qalmo daawashada - 7 Seeds ma mudan tahay in la daawado?
Aad uxun characters - 7 Seeds ma mudan tahay in la daawado?
Tani waxay ka horimaan kartaa wixii aan kor ku soo sheegay, hase yeeshe waxay u baahan tahay in la sheego. Jilayaasha ku jira 7 Seeds ayaa si liidata ugu qoran, ugu caajis badan isla markaana aan dhiirrigelin lahayn. Ma jirin wax aad loo buun-buuniyey oo keliya wax iyaga ka dhigaya inay ka soo baxaan midkoodna. Runtii jilayaasha riwaayaddan ayaa ah kuwa la garaacay ama wax seegay, waxaa jiri doona daawadayaal qaar ka mid ah oo u maleynaya inay jiraan wax aniga ila mid ah waxaana jiri doona qaar ka mid ah daawadayaasha oo u maleynaya inay jiraan ok, (inta badan), waxa aan kuu sheegi karo ayaa ah inaysan jiri doonin noqo qof kasta oo halkaas ku fikiraya wanaag, ama ka xun, weyn.
Settings - 7 Seeds ma mudan tahay in la daawado?
Dejinta 7 Seeds sidoo kale waa qodob kale oo saameyn ku yeelan doona cimilada ama aan ahayn 7 Seeds ayaa mudan in la daawado, maadaama ay si quruxsan u dhacday ama u seegtay sidoo kale. In lagu dhigo jaangooyo jaban ka dib dhacdooyinka aerood-garaaca dhulka ku dhaca dhulka Japan iyo halka sheekada 7 Seeds ka dhacdo waa wax kale oo laga fiirsado. Markii hore waan jeclaa dejinta laakiin waxay noqotay dhibaato si dhakhso leh ugu dhacday sheekada. Fikradda ayaa ah in 300 + sano jilayaashu hurdo ku jireen adduunyada cusubi si tartiib tartiib ah ayey u horumarinaysaa, waxaan ku arki karnaa tan kulamadooda adduunka, iyo dabcan cayayaanka waaweyn iyo xayawaanka ay la kulmaan. Waxaa jira godad badan oo shirqool iyo khaladaad isdaba-joog ah oo dhammaantood ka soo jeeda meeshan waana asalka dhibaatooyinka badan ee taxanaha.
Socodka xun - Miyuu 7 Seeds u qalmaa daawashada?
Waxyaabaha kale ee looga baxo laabta aniga oo ku saabsan 7 Seeds waxay ahayd xawaareynta, taas oo aad u xun. Mararka qaar waxay noqon kartaa mid dhakhso badan, gebi ahaanba ka boodda saacado iyo maalmo gudahood ilbiriqsiyo gudahood, marar kalena waxay gebi ahaanba ka gaabisaa heer hal maalin ay qaadan karto 2 dhacdo. Qaado tusaalahan, dhacdada 4 jilayaasha waxay u sheegaan koox kale oo ay la kulmaan (taas oo jirtay 3 sano) inay halkaas joogeen in ka badan 1 bil. Markaa waan arki karnaa intee in le'eg bay ku jirtay booska 3 qaybood. Dhammaantood waxay u labbisteen si isku mid ah waxayna u egyihiin sidii ay ku sameeyeen qeybta bilowga.
Dialogue - 7 Seeds ma mudan tahay in la daawado?
Aragti ayaa odhanaya inaadan waligaa dareemin wadahadal wanaagsan sax? Kaliya waxay socotaa adigoon ogeyn. Hagaag hadday taasi tahay markaa 7 Seeds waxay leeyihiin qaar ka mid ah wadahadalkii ugu xumaa ee aan la kulmo anime, iskaba daa la qabsi. Waan ogolaaday waxaan daawaday nooca Ingriiska loogu magac daray waxaanan fahansanahay in wada hadalada laga yaabo inay ku xirnaan doonaan qaladaad yar oo kala guur ah waligeyna ma awoodi doono inaan fahmo waxa qoraha asalka ah dhab ahaan ula jeedo.
Si kastaba ha noqotee, waan iska laadayaa haddii aanan ku xusin tan liiska maxaa yeelay haddii aad danaynaysid wadahadalka markaa 7 Seeds ayaa laga yaabaa inaanay adiga kuu ahayn, maxaa yeelay wadahadalka waa mid aan macquul ahayn, wuxuu si joogto ah u jebiyaa bandhigga ha u sheegin sharciga, mararka qaarkood gabi ahaanba waa wax aan micno lahayn laakiin inta badan waxay u adeegtaa oo kaliya in lagu sii kordhiyo sheekada ama loo gudbiyo shucuurta astaamaha gacmeed ee adeegsanaya marka hore. Adiga oo aan aad ugu galin waa wax lagu qosli karo oo waxaad si fudud u arki kartaa inay tahay armature.
Qoraagu wuxuu isku dayaa inuu ka dhigo mid qoto dheer (shucuur leh) laakiin ma shaqeyneyso, oo ay weheliso jilayaasha codka (taasi ma siineyso wax ixsaan ah) kaliya wey banaanka soo dhigeysaa laakiin markaan runta ka hadlo waxaan filayay isla marka aan arko "Netflix Asal ahaan ”xarfaha waaweyn ee cas bilowga Qeybta 1aad, horey ayaan u ogaa waxa aan ku jiray markii aan taas arkay.
Sheeko aan macquul ahayn - 7 Seeds ma mudan tahay in la daawado?
Si fiican ayaan u ogahay in 7 Seeds ay tahay shaqo mala-awaal ah hase yeeshee waa sheekooyinka hoose ee runtii aan dhibaatooyin ku qabay. Tusaale ahaan xaqiiqda ah in kooxaha kala jabay ee Kooxda Xagaaga B ay awood u leeyihiin inay si fudud ugu dhex maraan dhul cusub oo gebi ahaanba ay bini aadamku weligood horay u soo marin noloshooda. Sidoo kale tan waxay si uun u awoodaan inay dib isu abaabulaan ka dib markay baaraan oo ay sahamiyaan adduunkan cusub iyaga oo aan lahayn wax xiriir ah oo isdaba-joog ah oo adeegsanaya raadiyaha ama wax kale, hase yeeshee si kastaba ha ahaatee waxay si wada jir ah isugu soo uruuriyaan qaybta 4 iyo 5.
Waxay sidoo kale had iyo jeer leeyihiin biyo iyo cunto meel kasta oo ay joogaan. Waxay ka helaan qolalkan dhulka hoostiisa ah (markasta) halkaas oo ay ku habboon yihiin cunno iyo biyo iyo sidoo kale waxyaabo kale oo muhiim ah. Dhibaatadu maahan arimahan (iyo qaar kaloo badan) shaqsi ahaan waa suurtagalnimada dhammaan arrimahan ay lahaan lahaayeen, sida taxanahan. Waxaan u maleynayaa inay si fiican u qori laheyd, sidaas darteed anime-ka ayaa dhab ahaan fursad u istaagi lahaa halkii aan ka heli lahayn hadda.
Jilitaanka codka xun - 7 Seeds ma mudan tahay in la daawado?
Caadi ahaan ra'yigayga ka dhiibto ku shaqeynta codka waana ixtiraami doonaa inay ku adkaan laheyd jilaayaashu inay naftooda geliyaan maskaxda dadka dhabta ah ee goob joog ka ahaan lahaa haddii sheekadani run ahaantii ay run tahay oo aysan khiyaali ahayn. Waxaan u maleynayaa in qoraagu isku dayayo inuu tijaabiyo waxa annaga, sida bani'aadamku u dhaqmi doono una malayn doono xaaladdan dhabta ah. Waa fikrad xiiso leh tanina waxay sii adkeyneysaa ujeedkeyga ku saabsan suurtagalnimada 7 Abuurka. Sababtoo ah waa fikrad aad u fiican oo mid la qabtay ilaa heer la mid ah. Waxaa jira taxane badbaado badan oo sidan oo kale ah waxayna badanaa aad uga fiican yihiin.
Waxaan u maleynayaa in qoraagu u socday hawlo kale oo malaha aanan ka arki karin shaqadiisa aragtidiisa. Ku shaqeynta codka kama caawineyso taxanaha dhinacyo badan, si aan caadi aheyn ayaa si xoog ah loo qabtay waxayna u muuqataa mid laga naxo. Mararka qaar jilayaasha ayaan ka dhawaajin sida loogu baahan yahay muuqaalada kale, waxay dhahaan khadadka doqonnimo aan macquul ahayn ee wada hadalka oo waligood xitaa ku oran doonin xaaladan. Wadahadalku wuxuu isku dayayaa inuu noqdo mid xariif ah oo qiiro leh laakiin weligiis ma shaqeynayo. Astaamaha si doqonnimo ah doqonimo iyo aflagaado ugu dambeeya ku dhammaada waxay yiraahdaan wax isku dayaya inuu u yimaado sidii shucuur iyo qoto dheer.
Asal ahaan codka waxqabadka ayaa qodaya qabriga wadahadalka. Waan ogahay inay u muuqato doqon laakiin taasi macno ahaan waa taas. Labadooduba waxay leeyihiin saameyn lamid ah halkaasna labaduba way ugu xunyihiin midba midka kale.
Muusig wanaagsan oo aan la socon mawduuca - Miyey 7 Abuur mudan tahay in la daawado?
Aad ayaan uga helay muusigga 7 Seeds, inkasta oo ay kor u kacday, iftiin iyo xitaa dhiirrigelin lahayd. Dhibaatada kaliya waxay ahayd inaysan la socon mowduuca taxanaha, oo runtii niyad jab ahaa. Waxaa jiray wadooyin waaweyn oo runtii maskaxdayda ka qaaday sida ay u xun yihiin wax kasta oo kale. Waqtiga iyo meelaynta raadraacyadu sidoo kale way fiicnaayeen, iyaga uun, sidii aan hore u sheegay, isma waafajinin dulucda taxanaha.
Ma aqaano sababta ay Netflix ama shirkadda wax soo saarku ula soo bixi kari waayeen wadooyin qaar oo runtii ku habboon mawduuca badbaadada. Waxay lahaayeen miisaaniyadda, taasi waa hubaal, kaliya maahan dadaalka.
Naqshadeynta dabeecadda caajisnimada - Miyuu 7 Seeds u qalmaa daawashada?
Jilayaasha ku jira 7 Seeds gabi ahaanba waa kuwo aan qiimo lahayn oo eeg in kastoo. Midkoodna kama helin xiise, mashquul ama dhiirrigelin sinnaba. Ma jiraan wax intaa ka badan oo aan ka dhihi karo iyaga oo ahaa kuwo la hilmaami karo. Dabeecad kasta waxaa kaliya loogu talagalay iyadoo qaar ka mid ah trope maskaxda lagu hayo iyo wadahadalka wax soo saarka kaliya iyaga ka dhigaya iyaga 10x aan loo dulqaadan karin. Tusaale ahaan, markii lagu qabtay iyagoo xadaya cunto koox ka soo horjeedda Asai waxay dhahdaa "Ah na man, waxaan kaliya raadinayay sadaqo" ugh, waan ku xanuujiyaa xitaa markaan soo xigto, ma aha waxa aad dhahdo markii farahaagu noqonayaan waa la gooyey laakiin waxba kama dhici doono haddii qof dhab ahaantii doonayo inuu daawado tan.
Awood lumis - 7 Seeds miyey mudan tahay in la daawado?
Tani waa sii socoshada qodob aan horay u sheegay, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan markale idhaahdo 7 Seeds ayaa leh qaddar aad u tiro badan oo lumis ah. Taxanaha ayaa aad uga fiicnaan lahaa. Kama faalloon karo manga sidii aanan u akhriyin, haddii Netflix ay shaqo fiican ka qabanayaan la qabsiga manga markaa uma muuqato mid wanaagsan. Waxaan u maleynayaa inaanan dhibin Waxaa jira qorshayaal hoosaadyo badan oo kala duwan oo si fiican loo qaban kari lahaa taasna, iyadoo waxoogaa isbeddello ah, la daawan karo oo aan ku dhiirran karo inaan idhaahdo, waa wax lagu farxo.
Qalab aan rasmi ahayn & qalab aan waxtar lahayn - Miyuu yahay 7 Seeds oo daawasho mudan?
Qalabka shirqoolka 7 Abuurka waa mid aan waxtar badan lahayn oo runti waligood ma gaarin waxa aan u maleynayo soo-saareyaasha ama qoraagu inuu ula jeedo. Dib u soo noqoshada doqonka ah ee bilaa micnaha ah, taasi run ahaantii waxaa lagu dabooli lahaa wadahadal kooban iyada oo aan loo baahnayn iyo waqti tan loo baahan yahay. Waxaa jira jilayaal qaar oo hela qiyaastii 5 daqiiqo oo shaashadda ah kadibna mar dambe dib dambe ugama maqalno iyaga, waxaa naloo soo bandhigaa si kooban kadibna dabeecadda waa la dilaa ama gebi ahaanba waa la ilaaway.
Tani waa wax aad u jahwareerinaya isla markaana isla waqti isku mid ah, maxaa yeelay waxaan waqti yar ku qaadaneynaa bilaabista maalgashiga dabeecaddaas, ka dibna marka la dilo waxaad helaysaa dareenkan cajiibka ah. Way fiicnaan laheyd inaad na siiso (daawadayaasha) waqti badan si aan ula jaanqaadno iyaga ka dibna aan u heli karno maalgashi, taas oo ka dhigeysa halkaa in badan oo saameyn nagu leh annaga iyo sheekada.
Qalabka arjiga heerka labaad - Miyuu yahay 7 Seeds oo daawasho mudan?
Qaababka dabeecadaha ee aan ku arkay 7 Abuurka waa kuwo aad u xun, oo aan ku xusin caajis iyo dhiirigelin la'aan. Kaliya intaas kuma fiicnayn oo sidii caadada ii ahayd ma aanan helin waqti igu filan oo aan ku hagaajiyo oo aan ku arko iyaga sida dhacdooyinka iyo qaansooyinku u socdaan. Si la yaab leh wax walbana waxay dareemeen deg deg tanina waxay ahayd mawduuc caan ka ah taxanaha. Waxay u egtahay in ay isku dayayeen in ay wax walba ku soo koobaan qaybahaas yar ee 22 daqiiqo ah.
Ku lammaan xawaareynta xun ee dareenka degdega ah ee 7 Seeds kaliya ayaa lagu daray. Xaqiiqdii aniga waxaan u arkaa mid xiiso leh in shaqsi walba arintiisu ay caawiso oo ka faa'iideysato kuwa kale, maaddaama dhibaatooyinka indha-sarcaadka ah lagu xallin karo si fudud, laakiin markay dhammaantood is caawiyaan waxay noqoneysaa dhibaato, tan ayaa ku dhacday 7 Abuur.
Gunaanad - 7 Seeds miyey mudan tahay in la daawado?
Sidaad u arki karto waxaa jira dhibaatooyin badan oo la xiriira 7 Abuurka oo kuwan oo dhami waxay saameyn weyn ku leeyihiin bal inay habboon tahay in la daawado iyo in kale. Sababaha aysan u qalmin daawashada ayaa si aad ah uga miisaan culus sababaha ay tahay. Sidaa darteed kugula talin maayo inaad daawato taxanahan oo ku saleysan wixii aan kor ku soo sheegay. 7 Seeds waa taxane leh awood aad u tiro badan waana wax laga xishoodo in lagu khasaaray showgan.
Qiimeynta xilliga 1:
Qiimeynta: 5 5 XNUMX.
Jilayaasha liita, sheeko aan macquul ahayn, wada hadal xumi, aalado maleegid aan faa iido lahayn iyo dhibaatooyin badan oo badan ayaa dhamaan barafka kudayaca taxanaha mudo aad u gaaban, iyadoo qayb walboo kaliya ay tahay 22 daqiiqo oo dheeri ah. Haddii aad u maleynaysid in tayada wanaagsan ee ku saabsan amarkan filimkan aad daawaneysid markaa horay u soco, waa lagaa digay inkastoo Haddii aad raadineyso nooca noolaanshaha anime, isku day Highschool Of The Dead. Waxaad ka akhrisan kartaa maqaalkeenna xilli 2 loogu talagalay Dugsiga Sare ee Dhimashada halkan.
Waxaan rajaynayaa in maqaalkani kaa caawiyay inaad go'aansato inaad rabto ama aad rabto inaad daawato 7 Seeds, haddii ay leedahay fadlan tixgeli inaad jeceshahay oo aad la wadaagto haddii aad awoodid, taasi ayaa in badan inaga caawin lahayd.
Akhri maqaalada la midka ah:
Kireysiga-Gabadh-saaxiibtiis Miyay Tahay In La Daawado?
Halkan ka aqriso qoraaladayada oo dhan: https://cradleview.net/all-posts/
Halkan ka akhriso taxanaheena xulashada sare: https://cradleview.net/top-5/
Halkan ka akhriso dib u eegistayada iyo ma mudan tahay daawashada maqaallada: https://cradleview.net/reviews/
Halkan ka akhriso qodobbadayagii ugu dambeeyay: https://cradleview.net/most-recent-posts/
Halkan ka aqri astaamaha dabeecadeena: https://cradleview.net/character-profiles/
Boggeena bulshada: https://cradleview.net/community-page/
Marabtaa inaad tabarucdo ?: https://cradleview.net/donations/
Bulshadeena kale ee 'Cradle View' ee isku xiran:
Boggeena Facebook: https://www.facebook.com/Cradle-View-100860831773122/
Kanaalkayaga YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRYkAdQhzg2HYxWoZrKmgdw
Boggeena Instagram: https://www.instagram.com/cradleview/
Tags: 7seedsanime 7seedsanimefulfullongreview 7seedsanimereivew 7seedsanimereview 7seedsanimereviewarticle 7dareen dabeecadeed 7 jilayaal abuur 7hadab 7mudo-eegis 7sedsreviewanimeime 7magaalooyinka-eegista dhirtu abuurka xoolaha sifada7seed ayaa wanaagsan? miyay mudan tahay in la daawado? waa 7seedsany wanaagsan? waa 7seeds mudan miyuu 7-seeds mudan yahay? waa mudan in la daawado miyay mudan tahay in la daawado? waa sevenseed sanime mudan in la daawado? todobo bisin baa mudan in la daawado? shalliwatch7sidan shalliwatch7seeds? shuldiwatch7seeds waaIwatchanime7sidan shouldiwatchanimeseedseds?
Gaar ah: Soddog-wadaagaha Qaybta 1 [Ingiriisi Sub]
CVS Red Samurai Design T-Shirt [Hor kaliya] $16.00 - $21.00
Ragga Classic CVS ​​Hannya Demon Shirt [Naqshadda hore kaliya] $20.00 - $27.00
Azure Kitsune Flask $35.00 $27.00
CVS Hannya Demon Koofiyad Horyaal [3 Midab] $27.00
T-shaati gacmo gaaban oo haween ah CVS Hannya $28.00 - $30.00
Gelitaan Hore Seiya Kanie - Astaanta Astaanta
Gelitaanka Xiga Maxay Black Lagoon xitaa u badan tahay inay hesho xilli 4